इन्डोनेसियामा नेपाली खेलाडीको पीडा देखेर म भक्कानिएको थिएँ : बिष्ट | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
इन्डोनेसियामा नेपाली खेलाडीको पीडा देखेर म भक्कानिएको थिएँ : बिष्ट
भदौ २१, २०७५ बिहिबार १५:२१:३५ | अर्जुन पोख्रेल
काठमाडौं – एसियाली खेलकुदमा नेपालको प्रदर्शन राम्रो भएन । आशा गरिएका तेक्वान्दो, जुडो, उसु, कराँते लगायतका खेलमा नेपाली खेलाडी विदेशी खेलाडी भन्दा निकै कमजोर देखिए ।
केही खेलमा प्रशिक्षकको विवाद अनि केही खेलमा संघ नै २ वटा हुँदा पनि समस्या देखियो । जुडोमा प्रशिक्षकबीच नै विवाद देखियो । खेलाडीले नै ‘म फलानोको प्रशिक्षणमा बाहेक खेल्दिनँ’ भन्ने अवस्था आयो ।
तेक्वान्दोमा पनि दुईवटा संघ भए । कुन संघ आधिकारिक भन्ने विवादकाबीच खेलाडी एसियाली खेलको लागि इन्डोनेसिया पुगेका थिए । पदक जित्ने तयारीका साथ जकार्ता पुगेका खेलाडीमा आत्मविश्वास नै देखिएन । दुई पटक एसियाली खेलकुदमा पदक जितेका दीपक विष्टको प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली तेक्वान्दो टोलीले पनि कुनै पदक जित्न सकेन ।
एसियाली खेलकुदमा तेक्वान्दो खेलाडीको प्रदर्शन, सुधार, कमजोरी अबको रणनीतिका विषयमा अर्जुन पोख्रेलले तेक्वान्दोका प्रशिक्षक दीपक बिष्टसँग गरेको कुराकानी :
इण्डोनेसिया गएर आउनुभयो, कस्तो भयो एसियाली खेलकुद ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त तेक्वान्दो सबैभन्दा धरै आशा गरेको खेल थियो । हामीले यसपाली पदक जित्न सकेनौं । जुन आशा थियो त्यो निराशामा परिणत भएको छ । त्यसको लागि त सर्वप्रथम म माफी माग्न चाहन्छु । अब कुरा रह्यो खेलाडीको एक्पोजर र त्यहाँ खेलाडीहरुले गरेको प्रदर्शनको कुरा । चार वर्ष अगाडि इन्चोनमा भएको एसियाली खेलकुदमा भन्दा अहिले एकदमै राम्रो प्रदर्शन भएको छ । तर पदक आउन सकेन । एकदमै खड्किएको कुरा यही हो ।
एउटा कुरा के हो भने चार वर्षको अन्तरालमा अरु देशहरुले धेरै नै प्रगति गरेको पाएँ । त्यसैले हामीले पदक ल्याउन सकेनौं । हामीले जति गर्नुपथ्र्यो, त्यति गर्न सकेनौं । पदक नजिक नजिक पुगेका थियौं, तर यसपालि अरु देशहरुले धेरै नै प्रगति गरेको अनुभव गर्‍याैँ।
विदेशका खेलाडीको आत्मबल निकै बलियो थियो । अनि प्राविधिक रुपमा पनि उनीहरु हामीभन्दा धेरै अघि देखिए । यसको समीक्षा हुनुपर्छ । र आउने चार वर्षको हामीले के गर्ने भनेर समीक्षा गर्ने हो भने अर्को पटक हामी अवश्य नै पदक ल्याउँछौं ।
एसियाली खेलकुदमा हाम्रा खेलाडी निकै निराश मुद्रामा देखिन्थे, मैदानमा उत्रिंदा पनि हाम्रा खेलाडीमा किन यति धेरै निराशा ?
एकदमै सही करा हो । हामीले के गरेका छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । खेलकुदलाई एकदमै भित्रबाट नियाल्नेहरुलाई थाहा हुन्छ कि हामीले के गर्यौं त विगत चार वर्षमा ? हाम्रा खेलाडीहरुले के गरेर बसे त ? कुन ठाउँमा ट्रेनिङ गरे ? कति ठाउँमा खेल खेले त ? कति ठाउँमा आफूलाई एक्सपोज गराए त ? उनीहरु कति अनुभवी भए त भन्ने कुराहरुको एकदमै अर्थ राख्छ ।
हामी टिभी हेर्दा हाम्रा खेलाडीहरुले राम्रो खेलेन, पिटाई खायो भने एकदमै खतम रहेछ भन्ने मात्रै बुझ्छौं । तर हाम्रो खेलाडीहरुले चार वर्षको अन्तरालमा विदेशका खेलाडीहरुको जस्तो सुविधा पाए कि पाएनन, तिनीहरुको जस्तो सिकाई वातावरण पायो कि पाएन भन्ने कुरा बझ्दैनौं ।
ट्रेनिङ र सुविधाको कुरा गर्दा, यस्तै ट्रेनिङ र सुविधामै भए पनि तपाईँसहित धेरैले पदक ल्याए नि हैन र ?
यो कुरा धेरै पटक आइसकेको हुनाले म तपाईँलाई एकदमै सहज तरिकाले भनिदिन्छु । मैले १५ वर्ष अगाडि खेल खेलेको हो । त्यतिखेर धेरै देशहरु आउँथे तर सबै देशहरु हामीजस्तै थिए । त्यतिखेर मैले धेरै बढी एक्सपोजर पाएको थिएँ । त्यतिबेलाको ट्रेनिङ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ पनि थियो नि । अहिले हेर्नुुुस् त, भूकम्प आएपछि कुन ठाउँमा ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ छ ? कति ठूलो विवाद छ ? तेक्वान्दोमा कति ठूलो विवाद ल्याइदिएको छ हेर्नुस त । ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ पनि अरुलाई दिएको छ । हामी आधिकारिक हौं कि होइनौँ भन्ने लडाईं छ ।
समय र परिस्थिति अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ आक्कलझुक्कल मेडलहरु आउँछन् । यी हामीले ल्याएका मेडलहरु, त्यतिबेला ट्रेनिङको प्याटर्न यो भन्दा पनि राम्रो थियो ।
राम्रो तरिकाले मेडल ल्याउने हो भने यो भन्दा राम्रो तयारी हुनुपर्छ । र अरु देशहरुलाई तयारीमा पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले पहिलादेखि नै राख्दै आएको हो । पहिला हामीहरु म्यानुएल खेल्थ्यौँ, हरेक खेलमा भाग लिइन्थ्यो, एक्सपोजर राम्रो हुन्थ्यो भने अहिले त्यो पनि छैन ।
अहिले त पीएसए सिस्टम छ । इलेक्ट्रिक सिस्टम छ, जहाँ रेफ्रीले पनि केही गर्न सक्दैन । त्यो पीएसए सिस्टम नेपालमा भित्रेको छ कि छैन ? हामीले कति त्यसमा ट्रेनिङ गरेका छौँ त ? हाम्रो खेलाडीहरुको मनोबलहरु के छ त ? किन विवादमा मात्र तानिरहेको छ ? एक वर्षमा दश महिना त हामी विवादमा मात्रै तानिन्छौं । तीन महिना कोरिया गएर, तीन महिना डाइट दिएर दुईचार महिना बन्द शिविरमा राखेर केही हुँदैन ।
तपाईँले भने अनुसार, नेपाली खेलको स्तर एकदमै निराशाजनक पो रहेछ । एकदमै देखिने गरी परिवर्तन गरिएन भने त नेपाली खेलको स्तर यही रहेछ । आउँदो ४ वर्षमा त अझ घट्ने पो रहेछ त ?
यो त एकदमै ध्रुवसत्य कुरा हो । अरु देशले ठूलो लगानी गर्ने, विशेष तरिकाले सोच्ने, नयाँ संयन्त्र नै बनाएर अगाडि बढाउनेबारे सोच्ने । तर हामी भने केही सोच्दै नसोच्ने तर मेडल मात्र पाउने सोच्ने हो भने कसरी हुन्छ ? हाम्रो खेलाडी कुनै पनि देशको खेलाडीभन्दा कम छैनन् । यदि सरकारले अबको चार वर्षमा मेडल ल्याउनुपर्छ भनेर लगानी गर्‍यो भने हामी तयार छौं । सरकार भन्न सक्नुपर्छ, लगानी हामीले गर्छौं वातावरण र योजना तिमी बनाउ तर मेडल ल्याएनौं भने जिम्मेवारीबाट बर्खास्तमा पर्नेछौ ।
यो एसियाली खेलकुदको कुरा गर्दा तयारी गर्नको लागि भएको रंगशाला पनि भूकम्पपछि भत्केर बनाउन सकेको छैन । सातदोबाटोमा पनि तयारी हुँदै गर्दा खेल्नको लागि पनि पर्याप्त ठाउँ नै भएन । अन्य सुविधाको कुरा गर्दा यतिसम्म कि खेलाडीलाई कभर्डहलमा खेल सिक्ने क्रममा ट्वाइलेट लाग्यो भने घर गएर ट्वाइलेट गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी तयारी गरिरहेका हामीलाई विदेशका खेलाडीसँग खेल्न निक्कै अप्ठेरो छ ।
खेलमा राम्रो भन्दा पनि हाम्रो खेलाडीहरु छनौट भएका भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो भएको छैन होला । अरु खेलमा के भयो मलाई थाहा भएन । तेक्वान्दोमा त्यस्तो कहिल्यै हुन सक्दैन । खेलाडीहरु हामी सबै एउटै परिवार हो । निष्पक्ष छनौट भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । जबसम्म म यो तेक्वान्दो संघमा रहन्छु तबसम्म यस्तो विभेद हुन दिने छैन ।
व्यवस्थापन पनि त्यस्तै देखियो । कुन खेलाडीको नाम दर्ता नहुने, कुनै खेलाडीले बीचमै दौड त्याग्ने । व्यवस्थापन पनि त गतिलो भएन नि होइन र ?
अवश्य नै अरु देशको खेलाडी यसरी खेल्न नपाएको कमै सुनिन्छ । म अहिले त प्रशिक्षक छूँ तर म आफूलाई खेलाडी भन्न रुचाउँछु । नेपालको झण्डा अंकित टिसर्ट अथवा कुनै ड्रेस लगाएर मैदानमा उत्रेर देशको झण्डालाई आत्मसाथ राखेर खेलाडीले त्यहाँ म मरेर पनि खेल्छु भन्छ । उसले तीन चार वर्ष घामपानी नभनेर यति मेहनत गरेको हुन्छ, तर खेल्न भनेर एरिनामा गएको बेला अर्थात फिल्डमा उत्रेको बेला फर्काइन्छ भने त्यो जस्तो पीडा कसलाई हुन्छ ?
म त त्यो दिन यति भक्कानिएको हो । एउटा खेलाडीले त्यहाँसम्म पुग्नको लागि घरपरिवारबाट टाढा रहेर रातदिन नभनेर जिन्दगी खर्चेको हुन्छ । अन्तिममा आएर त्यसरी फर्काइन्छ भने त्यसमा कति पीडा होला, त्यो त खेलाडीलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
यस्तो हुनु हुँदैन । यो एकदमै गम्भीर त्रुटी हो । यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाइनुपर्छ । यदि जानी जानी चुकेका हौं भने सजाय दिइनुपर्छ । अर्कोपटक यस्ता कुरा दोहोरिनु हुँदैन ।
हामी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सुन्छौँ, अबको बीस वर्षपछि हामी यति पदक ल्याउँछौँ भनेर योजना बनाइरहेका हुन्छन् । हाम्रोमा भने चार वर्षको पनि योजना बन्न नसक्नुको कारण के रहेछ ?
देश कसरी चलिरहेको छ त्यो अनुसार नै खेलकुदको संयन्त्र पनि चल्ने हो । देशलाई सिंगापुर बनाउनुपर्छ भन्ने तर पारा पुरानै । खेलकुदमा पदक जित्नुपर्छ भन्ने तर कहिल्यै पनि कार्यान्व्यन नगर्ने । पदक ल्याउनको लागि प्रक्रिया हुन्छ । खेलकुदका संस्थामा एउटा पाटो खेलकुद चलाउने हुन्छ अनि अर्को पाटो मेडल कसरी ल्याउने भन्ने हुन्छ । हाम्रोमा त खेलकुद चलाउने मात्रै भयो, पदक ल्याउनेतर्फ कसैको ध्यान नै गएन । प्रशासन हेर्ने र खेलकुद हेर्ने मान्छे एउटै छन् । अनि कसरी हुन्छ त ।
हामीले खेलाडीले राम्रो गर्न सकेनन मात्रै भन्यौं । उनीहरुले कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्नेमा ध्यान गएको जस्तो देखिन्न । हाम्रा खेलाडीहरु आफू बाँच्न र सामान्य खालको जीवनशैली जिउनको लागि कति सक्षम छन् ?
अहिलेसम्मका पदक जितेका खेलाडीहरु केही बाहेक किन नेपालमा छैनन् । त्यही बाँच्ने आधार नभएर त होला नि । सरकारले तलब तथा केही इन्सेन्टिभ दिन्छ, त्यतिले पुगेन भने के गर्छ त उसले ? चाइना कोरियालाई हेर्ने हो भने त्यहाँका खेलाडीहरुलाई मसाज गर्नेदेखि लिएर पोषणसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गरेको हुन्छ ।
हाम्रोमा त खेलाडीले पाउने न्यूनतम समाजिक सुरक्षा जुन छ त्यो पनि नपाएपछि खेलाडीहरु विदेसिने हुन् । विदेशमा गयो भने मासिक ४-५ हजार डलर कमाउछ भनेपछि पदक जितेको खेलाडी नेपाल बसेर के काम त । त्यही भएर पदक विजेताहरु विदेसिने हुन् । यदि उनीहरुलाई पर्याप्त रुपमा सहयोग गर्यो जीविकोपार्जनको राम्रो आधार यही भइदिएको भए तिनीहरु यहीँ बस्थे होलान् ।
मेरै कुरा गर्दा मैले २ पटक एसियाली खेलमा र ४ पटक दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक ल्याउँदा पनि बानेश्वरमा व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता तपाईँले देख्नुभएको छ नि । सरकारले दिएको पैसाले म त चल्न सक्दिन नि । मेरा २ जना छोराछोरी छन्, बुवाआमालाई हेर्नुपर्छ, व्यापार नगरी सुख छैन ।
मैले आफ्नो जिन्दगी खेदकुदमार्फत देशमा लगानी गरेपछि त सरकारले पनि मेरो लागि केही गरिदिन पर्दैन ?
यतिबेर हामीले निराशाका मात्रै कुरा गर्‍यौं । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अब नजिकिँदै गरेको साफ खेलबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
अहिलेको हाम्रो जुन प्रदर्शन छ, त्यो पहिलाको भन्दा राम्रो छ तेक्वान्दोकै कुरा गर्ने हो भने । तीनचार महिना कोरियामा ट्रेनिङ गर्यौँ । त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्यौं । यहाँ त कुनै ठाउँ नै थिएन । तयारी गर्नको लागि राम्रो कभर्डहल पनि थिएन । त्यहाँ गएर नै यो प्रदर्शन भएको हो । हाम्रो खेलाडी रिङमा दुई मिनेट पनि टिक्दैन थिए । अहिले त राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यही प्रदर्शनले गर्दा अहिले दक्षिण एसियाका सबै देशलाई हराइसकेको छ । त्यही भएर हामीले दक्षिण एसियाली खेलमा राम्रो गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।
अबको चार वर्षपछि हुने एसियाली अथवा दक्षिण एसियाली खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्नको लागि के के कुरामा सुधार्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिला एउटा योजना बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ । एकदमै क्वालिटीका प्रशिक्षक, तालिम गर्ने ठाउँ र त्यो प्रकारको वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्यो । खेलाडीहरुलाई पनि विशुद्ध तरिकाले पदक जित्ने वातावरण निर्माण होस ।
खेलाडीमा पारिवारिक तथा पढाईको चिन्ता नहोस । प्रशिक्षकहरु पनि मेडेल जिताउनेमा समर्पित हुन् । व्यवस्थापनको पाटोमा सरकारी संयन्त्र पनि मज्जाले लागोस । खेलकुद संघ, परिषद सबैको एउटै अर्जुनदृष्टि हुनुपर्यो, हामीले कसरी पदक जित्छौँ भन्ने कुरामा ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहलिएका ठाउँमा तालिम भयो भने खेलाडीमा पनि त्यही अनुसारको आत्मविश्वास पनि बढ्छ । हाम्रो जस्तो रिङमा तयारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिङमा लड्दा आत्मविश्वास बढ्ने होइन घटछ । त्यही भएर खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेनिङ हुन जरुरी छ । त्यसो भयो भने नेपाली खेलाडी लड्न डराउँदैन ।
श्रीलंकामा चर्च र होटलमा बम विस्फोट
नेकपाको एकता प्रकृया टुंग्याउन शीर्ष नेता छलफलमा
धुन्चे–गोसाईंकुण्ड केबलकार निर्माण गरिने
आइतबारका लागि रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायतका विदेशी मुद्राक...
कामदारबाट नामी व्यवसायी
त्रिविको जग्गा जसले लिए उसैले राखे, ल्याबाेरेटरी स्कुलको जग्गा...
सगरमाथा क्षेत्रमा संकलित फोहोर काठमाण्डौमा
गोरखा दरबार पुनर्निर्माणको एक वर्ष : २० प्रतिशत मात्रै काम सकियो
हावाहुरी र मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना, सावधानी अपनाउन ...
जर्मन बुन्डेसलिगामा बायर्न म्युनिखको जित
भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि यौन दुर्व्यवहारको ...